Zeziphi iiQhinga, iiTactics, kunye neChannel kufuneka ukuba abathengisi bagxile kwi-2017 | Martech Zone
Ndijonge phambili ekufundeni kumagqabantshintshi okanye kuluntu lwethu into ojolise kuyo ngo-2017. Njenge-arhente, siya kutsalwa kumacala amaninzi kodwa ukugxila kuthi kubaxhasi kuyaqhubeka nokwandisa inkcitho yabo yentengiso kunye nokubonelela ngexabiso Iimveliso zethu kunye neenkonzo abazityalileyo. Uncedo esinalo njengomshicileli kunye nearhente kukuba sinokuvavanya Izinto ezikhazimlayo ukunciphisa wonke umngcipheko ngokubanzi. Ukwamkelwa ngokukhawuleza kwe Itekhnoloji yentengiso iluncedo… kodwa kuphela xa isengqiqweni.
Ukukunceda unciphise ukugxila kwakho, jonga intengiso entsha ye-MDG, Izigqibo ezi-7 Wonke umMakethi kufuneka azenzele u-2017. Iqaqambisa izimvo eziphambili kunye neendlela ezifanele ukuseta kakuhle kulo nyaka uzayo.
Sijonge omnye unyaka wamathemba ethu esokola ngokwenene. Babengenalo uhlahlo-lwabiwo mali okanye amaqela ukuba aqonde ngokupheleleyo amandla abo okuthengisa. Ngenxa yoko, uninzi lomsebenzi usetyenzisiwe koko bakwenzileyo ugqwesile ngento abanokuyenza ukufumana ukugcina iintloko zazo ngaphezulu kwamanzi. Eyona metric iphambili esiyibonileyo ilahlekile kuwo onke amathemba yayikulindelo lwento yabo Utyalomali lokuthengisa kufuneka lube yipesenti yengeniso iyonke. Olu luqeqesho olukhulu lokutyala imali kwishishini lakho ngoku, kunokuba ulisebenzise kamva, ukuze uqhubeke nokukhawulezisa ukukhula kwakho.
Iindlela zokuthengisa, amaqhinga, okanye amajelo okugxila kuwo ngo-2017
Abantu, hayi amajelo: Kuphela ngama-25% abasebenzi beshishini abanesicwangciso-qhinga esiphangaleleyo sokujolisa kwizicwangciso zakho kuhambo lwabathengi kunye neeakhawunti eziza kukunceda ukuba usebenze kwaye udibanise iindlela zakho ze-omni-channel. Intengiso esekwe kwiakhawunti (ABM) iyaqhubeka nokuqhuba uninzi lwezi zicwangciso.
into yokuZenzekelayo: I-94% yabathengisi abazenzekelayo ezinye zeenkqubo zabo bathi ziphucule ukusebenza kwenkampani yabo Ngelixa amajelo kunye nezicwangciso ziba nzima ngakumbi, izixhobo zokuthengisa kwiinkampani zihlala zinqabile. Olona khetho kubathengisi kukujonga ukuthengisa itekhnoloji yokulawula kunye nokwenza ngcono iindlela zabo zokuthengisa.
umxholo: I-58% yabathengisi abasebenzayo be- # B2B banesicwangciso esiliqili sokuthengisa umxholo Amashishini avelisa itoni yomxholo ongasetyenziswanga, ongaziwayo, kunye nokwenza okuncinci yonke imihla. Singacebisa ukuba kuphuhliswe ilayibrari yomxholo indlela yokuvelisa umxholo.
Ucoceko lwedatha: Idatha yama-24% yabathengi yabathengisi ayichanekanga, ngokomndilili Njengokuba ubuqu kunye nobumbano lwabathengi kwi-intanethi nangaphandle kweintanethi kulindeleka ngakumbi kubathengi nakumashishini, idatha embi iya kuba liva kwiinkampani ezininzi. Kungenxa yoko le nto amaqonga edatha yabathengi ziyakhula ngokwamkelwa.
yokuzonwabisa: Kwakukho ukwanda ngama-20% kwinani levidiyo ekwi-intanethi eyayijongwa ngo-2016 ividiyo ikhawuleza ibe sisiqulatho somxholo esithandwayo kubathengi abaninzi. Ukufunda iintambo zevidiyo-njengokuthi njani Isandi esinexabiso eliphantsi sibuhlungu ngaphezu kwevidiyo embi - kubalulekile njengokukhanyisa, ukubhala kunye nobude bevidiyo.
ukhuseleko: I-29% yabo bonke abathengi bayaziphepha iintshukumo ezenziwa kwi-Intanethi ngenxa yezizathu zokhuselo iTrust yenye yezona zithintelo zinkulu kumthengi okanye kwishishini ekufumaneni kwi-Intanethi nasekuguqukeni kwithemba libe ngumthengi. Ukuqinisekisa zabo idatha ikhuselekile kwaye ukunxibelelana ngamanyathelo owathathayo ukukhusela umxholo wawo kubalulekile.
Iiteknoloji ezihlumayo: Ubukrelekrele bokwenyani buqikelelwa ukuba buzokuphinda kabini ukukhula koqoqosho ngo-2035 kwaye inyani ebonakalayo ye-Intanethi ithelekelelwa ukuba inyuse amaxesha angama-61 ngo-2020.
tags: abmIntengiso esekwe kwiakhawuntiesizisebenzelayoukuthengisa umjeloilayibrari yomxholoUkuThengiswa kweMpahlaidatha yomthengiucoceko lwedathaubuchwepheshe obuvelayoukuzenzekela ngokuzenzekelayoukhuselekoumxholo wevidiyoukuthengisa ividiyo